Nhau - Sei Kudya Maapuro Akaomeswa Kwakakunakira?
Kwete 61 Hongkong Road, Pingdu, Qingdao China
Mvura Yakasanganiswa Nemichero
Sei Kudya Maapuro Akaomeswa Kwakakunakira Iwe?
Maapuro akaomeswa anodzivirira kupatira uye anokuchengeta iwe uzere kwenguva refu
Dzimwe nzira dzekuchengetedza michero dzinowanzo bvisa zvemuchero zvemukati muchero Asi kwete maapuro akaomeswa.
Imwe yemabhenefiti emaapuro akaomeswa ndeyekuti inorongedza huwandu hwakawanda hweasina kusungunuka uye isingasvike fiber. Hafu yekapu yemapuro akaomeswa anotokupa inokwana magiramu 3-4 efayeti yezvikafu, inokwana kuvhara 13-20% yezveko fiber zvezuva nezuva.
Fibha inokuchengetedza kuti ugutsikane nekudzivirira spikes mumashuga eropa rako mushure mekudya. Inobatsirawo kubvisa chepfu uye hutachiona hunokuvadza kubva mudumbu rako. Fibhi inorerutsa chetsoka yako kuti chengetedze kupatira pamwe. Soluble fiber ine basa rekudzora ako mashuga eropa, nepo isina kubatika fiber inochengeta ura hwako hwakachena.
Sarudza maapuro akaomeswa achine ganda ravo, sezvo iri iko kunobva kwakawanda fiber.
Maapuro akaomeswa ane B-mavitamini ayo akanaka kune mahormone, huropi uye simba
Maapuro akaomeswa ane maviri akakosha B-mavitamini ayo anokurudzira simba metabolism, inovandudza mahormone mwero, uye inosimbisa uropi. Iyo pantothenic acid (vitamini B5) uye pyridoxine (vitamini B6).
Pantothenic acid inoitirwa kubatsira muviri wako kugadzira simba kubva pane chikafu chaunodya. Izvo zvakakoshawo mukugadzirwa kwehomoni. Maapuro akaomeswa ane inenge 3% yezvakakurudzirwa kudya kwezuva nezuva kwevhitamini.
Pyridoxine B-vhitamini iyo inobatsira mukugadzirisa mapuroteni uye inobatsira mukugadzira maurotransmitter. Neurotransmitters makemikari anotumira muuropi ayo anovandudza kupindura kwehuropi uye basa. Maapuro akaomeswa anogona kufukidza kwakatenderedza 6% yeako akakurudzirwa ezuva nezuva pyridoxine kudya.
Maapuro akaomeswa anovandudza hutano hwemagetsi
Maapuro akaomeswa ipfuma sosi ye antioxidants, kunyanya polyphenols. Izvi zvinhu zvinobatsira kurwisa kukuvara kumaseru ako anokonzerwa nemahara radicals.
Mahara radicals mamorekuru nemaatomu anopihwa nezvinhu zvakaita semhepo inosvibisa, mishonga yezvipembenene, doro, uye chikafu chakakangwa. Mahara radicals anonwiwa nemuviri uye anokonzeresa kukuvara kwesero kuburikidza nemaitiro anozivikanwa seakisijeni. Izvi zvinoreva kuti mahara radicals anotora maerekitironi anowanikwa muchitokisi, achiisiya iine mapuroteni akakuvara, membranes, uye DNA.
Masero akakuvara anogona kuitika mune chero nhengo uye system yemuviri wako. Iwe unogona kunge uchiziva nekusaziva kukuvara kwemaseru mune zvimwe zvikamu zvemuviri wako. Zvimwe zviratidzo zvekukuvara kwemaseru zvinogona kusanganisira kuneta kwemuviri, kuoma, kusviba ganda, uye kusagadzikana kwepfungwa.
Polyphenols ma antioxidants anobatsira akakuvara maseru kuzvimisazve iwo. Vanogona kudzikisira mahara radicals nekutsiva maerekitironi abiwa kubva mumasero. Polyphenols zvakare inobatsira mukuderedza huwandu hwemahara radicals anopinda mumuviri.
Imwe yemabhenefiti emaapuro akaomeswa ndeyekuti inovandudza polyphenol mazinga mumuviri. Iyo antioxidants yakaburitswa kuburikidza nekudya maapuro akaomeswa anobatsira maseru ako kusangana nemhedzisiro yekukuvara kwemaseru. Masero emuviri wako anozodyiswa uye anozoshongedzerwa kuzvirapa nekukurumidza, zvichitungamira mukuwedzera kwesimba, kupenya kunoonekwa paganda rako, uye nekuvandudzwa kwemafungiro ako uye kushanda kwepfungwa.
Post nguva: Kubvumbi-13-2021
Chikafu cheNhaka chinotangwa zvinoenderana nechikafu GMP chiyero zvakanyanya. Heritage ndiyo yemazuva ano michero yakaomeswa yekugadzira michero.